Beach Soccer : nomena “ordre du merite sportif” ny mpilalaon’ny Barea | NewsMada
Notoloran’ny fitondram-panjakana, «ordre du merite sportif », ireo mpilalao nandrafitra ny Barea de Madagascar, nahazo ny Can 2015, eo amin’ny taranja beach soccer. Ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra, Rakotomamonjy Neypatraiky, nisolo tena ny tomponandraikitra misahana izany, no nanolotra izany, ho an’ireo mpilalao.
“Chevalier de l’ordre nationale“, kosa ny an’ireo mpanazatra 3 mirahalahy dia i Claude Barrabé, Solofo ary François. Ankoatra izay, handray anjara amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika indray, hatao any Nizeria, ny Barea de Madagascar, amin’ity. Hiaro ny anaram-boninahitra efa eo am-pelantanany izany ny Malagasy, amin’ity.
Mila miomana fatratra araka izany, ny Barea satria efa miandry fatratra ny Malagasy ny mpifanandrina aminy. “Mora ny mahazo ny amboara fa ny miaro izany no tena sarotra”, hoy ny minisitra Neypatraiky. Ankoatra izay, nanome, “tablette”, ho an’ireo sekretera jeneralin’ny ligy 22, ny minisitra Neypatraiky, raha Box G4, ny an’ny orinasa Telma, izay mpanohana voalohany ny baolina kitra eto Madagasikara.